डिभोर्सपछि ऋतिककोे यी ५ यूवतीसँग प्रेम ? | Jukson
डिभोर्सपछि ऋतिककोे यी ५ यूवतीसँग प्रेम ?
सुजनसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि बलिउड नायक ऋतिक रोशन अहिले एक्ला छन् । तर, उनी एक्लो भएपनि विभिन्न सुन्दरीसँग नाम भने जोडिन छाडेको छैन । बलिउडदेखि अन्य क्षेत्रका विभिन्न सुन्दरीसँग ऋतिकको नाम जोडिएको छ ।
अहिले उनको नाम म्याङ्लोरकी एक सुन्दरीसँग जोडिएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अहिले यी दुइलाई विभिन्न स्थानमा देखिने गरेको छ । ऋतिकको नयाँ चलचित्रको छायांकन स्थलमा पनि यी सुन्दरीसँग ऋतिकको सम्बन्धको बारेमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
यी सुन्दरीको नाम पूजा हेगड हो । पूजाले केही कन्नड चलचित्रमा पनि काम गरिसकेकी छिन् । उनी ऋतिकले नै काम गरिरहेको चलचित्र ‘मोहनजोड्दो’बाट बलिउडमा पाइला राख्दैछिन् । तर, बलिउडमा आउनु अघि नै उनको नाम ऋतिकसँग जोडिएको छ ।
सुजनसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि ऋतिकको नाम बलिउड सुन्दरी कंगना रणावतसँग जोडिएको थियो । चर्चा त यो पनि थियो कि, कंगनासँग ऋतिक बिहेको तयारी पनि गर्दैछन् ।
ऋतिक सुजनसँग अलग भएपछि उनको नाम बलिउड नायिका इशा गुप्तासँग पनि जोडिएको थियो । तर, पछि यो कुरा सामान्य भयो । ऋतिकलाई सुजनसँग टाढा भएपछि तनावबाट मुक्त गराउन डाक्टर अफरिन खानले साथ दिएका थिए । तर, पछि अफरिनकै श्रीमतीसँग ऋतिकको अफेयर चलेको चर्चा पनि बलिउडमा खुबै चल्यो ।
हलिउड सुन्दरी क्रिस्टन स्टेवार्टले उनको बच्चा ऋतिकको जस्तै देखिनेछन् समेत भनेकी थिइन् । ऋतिककै कारण क्रिस्टनको प्रेमीसँगको सम्बन्ध प्रभावित भयो ।
विन्डोज १० जुलाइमा
गुगलमा भारतका टप टेन अपराधीको सूचिमा मोदीको तस्विर आएपछि हंगामा
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कंदै